युकेमा आधारित SARMs स्टोरको बारेमा जान्नुहोस्
सर्म्स स्टोर हाम्रो बारे
बेलायत मा आधारित, हामी मा सर्मस्टोर जीवनको अधिकतम गुणस्तरमा विश्वास राख्नुहोस् र जिम र जीवनशैलीको बीचमा उत्तम सन्तुलन सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको नतीजाहरू अझ प्रभावकारी तरिकामा प्राप्त गर्न मद्दत गरेर
हामी उच्च गुणवत्ता बेच्दछौं सर्टिफिकेट & पूरक जो सुरक्षित, प्रभावकारी र कानूनी छन्। यी यूकेमा फार्मास्यूटिकल ग्रेड अवयवहरू प्रयोग गरेर उच्च गुणवत्ताका मानकहरूमा निर्माण गरिन्छ। सर्महरू बडीबिल्डर्स, खेलाडीहरू र सामान्य जिम जानेहरू जो उनीहरूको शरीरलाई सुधार्न चाहान्छन् अधिक प्रयोग हुँदैछन्।
सर्महरू पूरकहरूको नयाँ वर्ग हो जुन मांसपेशि लाभ र फ्याट घाटामा अब अन्य सबै विकल्पहरू अघि बढेका छन्। स्टेरोइड्स र प्रोमोर्मनहरू अब अप्रचलित मानिन्छ र सर्मले गर्ने उही जोखिम-पुरस्कार प्रदान गर्दैन।
सर्म्समा सामान्यतया कुनै धेरै कम साइड इफेक्टहरू हुँदैन तर अझै उत्कृष्ट मांसपेशी निर्माण र फ्याट हानि गुणहरू प्रदान गर्दछ। सर्म गैर कलेजो विषाक्त हो, तिनीहरूले कुनै टक्कड मुड स्विंगहरू र अन्य अवांछित साइड इफेक्टहरू पैदा गर्दैनन् जुन स्टेरोइड्स, पेप्टाइड्स र प्रोहोरम्सले गर्छन्!
तिनीहरूले कसरी काम गर्छन्?
स्टेरोइडको विपरीत, सर्म्स विशेष रूपमा मांसपेशी रिसेप्टर्समा बाँध्नको लागि डिजाइन गरिएको हो।
स्टेरोइड र प्रोमोर्मोन मांसपेशी रिसेप्टर्समा मात्र होइन तर मस्तिष्क, कपाल र आँखा सहित रिसेप्टर्सको एक ठूलो संख्यामा पनि बाँध्छन्। यो के कारण मुड स्विंग्स, कपाल झर्ने र दृष्टि को समस्याहरु को रूप मा साइड इफेक्ट को कारण दिन्छ। सर्म्सलाई प्राय: "डिजाईनर स्टेरॉइड" को रूपमा हेरिन सकिन्छ यद्यपि यो स्टेरोइड होइन तर यसले कुनै राम्रो प्रभावको बिना मांसपेशीहरूको फाइदा र हानि गुणहरू प्रस्ताव गर्न सक्ने तरीकाले यसलाई उपनाम दिन्छ। धेरै सर्म्सले तपाईंको प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोनको स्तर कम गर्दैन जसको अर्थ PCT को आवश्यकता पर्दैन। केहि उपयोगकर्ताहरु चक्र पछि एक प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चलाउँछन् तर यसको विरलै चाहिन्छ। यसको मतलब तपाईंले आफ्नो लाभहरू १००% राख्नुहुन्छ।
सर्म गुणहरूको अवलोकन
तल हामीले प्रत्येक सर्मको मुख्य विशेषताहरू सूचीबद्ध गरेका छौं, प्रत्येक प्रयोगकर्ताहरूको लक्ष्यहरूको लागि सर्मलाई के राम्रो रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने बारेको सिंहावलोकन प्रदान गर्न मद्दत गर्न।
शरीर सौष्ठव ल्याब Ostarine MK-2866 "सबै राउन्डर" दुब्ला मांसपेशी लाभ र पानी प्रतिधारण बिना धेरै सुख्खा लाभ संग फ्याट घाटा।
शरीर सौष्ठव प्रयोगशालाहरू Ibutamoren MK-677 "ग्रोथ हार्मोन" शरीरमा GH को स्तर बढाउछ। सुधारिएको रिकभरी समय, राम्रोसँग, रंगले गर्दा मांसपेशीहरूको द्रव्य थप्न र फ्याट घाटा हराउँदा। पुन: प्राप्ति र पुनःस्थापनाको लागि चाँडो हड्डीहरू र टन्डनहरू पनि उत्तम गर्दछ।
शरीर सौष्ठव ल्याब टेस्टोलोन RAD-140 "एनाबोलिक: ०: १" यो अत्यधिक एनाबोलिक सर्म हो जसले कुनै दमनको कारण गर्दैन र परिणामस्वरूप ठूलो मांसपेशि लाभ हुनेछ र प्रयोगकर्तालाई पानी प्रतिधारण दिदैन। समयको छोटो अवधिमा परिणामहरू प्राप्त गर्न खोज्नेहरूको लागि ठूलो कम्पाउन्ड।
शरीर सौष्ठव ल्याब कार्डरीन GW-501516 "सहनशीलता र फ्याट घाटा" पनी पहिलो खुराक पछाडि तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि तपाई लामो समय सम्म चलाउन सक्नुहुन्छ, कडा मिहिनेत गर्नुहोस् र बढी भास्कुलर देखिनुहोला। यो सर्मले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्लेटौंस र स्ट्रिप हटाउनेछ अनावश्यक फ्याट हटाउन। यो एक्लै राम्रो काम गर्दछ तर वास्तवमा यसको आफ्नै आउँछ जब स्टक गरियो संग S4 र वा Ostarine
शरीर सौष्ठव ल्याबहरू Andarine S4 "सर्म काट्ने" यो सर्मलाई काट्ने प्रयोगकर्ताहरूकोलागि उत्कृष्ट। शरीरलाई फ्याट बर्नको स्थितिमा राख्छ जबकि मांसपेशिहरूको सुरक्षा गर्दछ र संवहिनता थप्दछ। गुणहरू winstrol समान वर्णन गरिएको छ यो उत्तम स्ट्याक्ड छ।
शरीर सौष्ठव ल्याब S-23 25mg "अनुभवी प्रयोगकर्ताहरू" भन्दा कडा Ostarine, यो छोटो समय फ्रेममा अधिक कठोर परिणाम चाहने प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिफारिस गरिएको हो।
शरीर सौष्ठव प्रयोगशालाहरू Ligandrol LGD-4033 "मास र हिलिंग" समयको छोटो अवधिमा मांसपेशी र तौलमा राख्ने क्षमताको लागि सर्वश्रेष्ठ सर्म। साथै अध्ययनले देखाउँदछ यसले हड्डीको घनत्व बढाउँदछ र चोटपटक पुनःस्थापना गर्दछ।
शरीर सौष्ठव ल्याब Stenabolic SR-9009 "फ्याट स्ट्रिपर" उत्तम फ्याट हानि सार्म, यो सार्मले शरीरलाई बढी माइटोकन्ड्रिया उत्पादन गरेर शरीरलाई बढी बोसो जलाउने र सहनशीलता सुधार गर्ने काम गर्दछ। यस सर्मको लागि वापत यसको छोटो आधा जीवन हो जसको अर्थ यो प्रत्येक २--2 घण्टा लिनुपर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू जसले मन नपराउँदछ यो सर्मलाई विचार गर्नुपर्दछ।
शरीर सौष्ठव प्रयोगशालाहरू ACP-105 "मांसपेशी वृद्धि" केहि पानी प्रतिधारण छ तर मांसपेशिहरु को वृद्धि र शक्ति मा ठूलो वृद्धि प्रदान गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन भन्दा% 66% बलियो।
बॉडीबिल्ड लैब्स शुरुआत काट्ने स्ट्याक - सार्ममा नयाँ को लागी नयाँ को लागी राम्रो छ वटा घाटा खोज्न को लागी शुरू गर्न।
शरीर सौष्ठव ल्याबहरू मध्यवर्ती कटिंग स्ट्याक - कसैलाई थप कठोर वसा घाटा नयाँ वा सर्म्सको अवस्थित प्रयोगकर्ताको खोजीमा लागि आदर्श।
शरीर सौष्ठव ल्याब उन्नत shredding स्ट्याक - यो अत्यधिक बोसो गुमाउन र अझै पनि मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न वा कायम राख्नका लागि उपलब्ध उत्तम स्ट्याक हो।
शरीर सौष्ठव प्रयोगशालाओं शुरुआत मांसपेशी स्ट्याक - -8-१२ हप्तामा मांसपेशिका केहि किलो थप्न खोजिरहेका प्रयोगकर्ताहरूको लागि सर्म्समा उत्कृष्ट प्रविष्टि स्तर।
शरीर सौष्ठव ल्याब मध्यवर्ती मांसपेशी स्ट्याक - -5-१२ हप्ता अवधिको अवधिमा k-१० केजीको मांसपेशी थप्नको लागि सक्षम।
शरीर सौष्ठव ल्याब उन्नत मांसपेशी स्ट्याक - उत्तम मांसपेशी आकार थप्नका लागि उपलब्ध स्ट्याक
शरीर सौष्ठव ल्याब Yohimbine एचसीएल - "सिफारिश गरिएको फ्याट बर्नर" हामी Yohimbine लाई हाम्रो छनौटको फ्याट बर्नरको रूपमा सिफारिस गर्दछौं। योहिमिबाइन सर्म होईन र यसको प्राकृतिक रूखको बार्क छैन तर उत्कृष्ट फ्याट हानि गुणहरू छन् र कुनै सर्मको साथ ठूलो काम गर्दछ।
SARMS के हो?
SARMS स्टेरोइड्स को लागी एक सुरक्षित, कानूनी विकल्प हो: पूरक को एक सफलता वर्ग जो प्रोफेर्मोनहरू र एनाबोलिक स्टेरोइडसँग समान कार्य गर्दछ साइड इफेक्टको बिना। अक्सर डिजाइनर स्टेरोइडको रूपमा संदर्भित, SARMS का चयन छनौट Androgen रिसेप्टर मोड्यूलेटर हो। एनाबोलिक स्टेरोइडहरू वा प्रोहोर्मोनहरू जस्तो नभई जसले कपाल र आँखा जस्ता अनावश्यक रिसेप्टर्सहरूसँग बाँध्ने र अनावश्यक साइड इफेक्ट निम्त्याउने प्रवृत्ति राख्दछ, SARMs ले छनौट रूपमा मांसपेशी र हड्डीमा एन्ड्रोजन रिसेप्टर्सलाई बाँधेर काम गर्दछ। यो छनौट बाध्यकारीले प्रदर्शन र पुन: प्राप्तिमा गहन वृद्धिको कारण दिन्छ र उनीहरूको स्वास्थ्य र सम्भावित साइड इफेक्टको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि एक आकर्षक विकल्प हो।
मेरो SARMS चक्रबाट म के आशा गर्न सक्छु?
दुबै मांसपेशिहरूको वृद्धि र फ्याट घाटामा परिणामहरू विस्तार गर्न धेरै SARMS स्ट्याक गर्न सकिन्छ। तपाईंको SARMS चक्र र स्ट्याक द्वारा, तपाईं प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ अन्तिम परिणाम दर्जी गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य परिणामहरू दुबै मांसपेशीय टिशूमा kkg-१०kg वृद्धि हुन सक्छ जबकि शरीरको पर्याप्त फ्याट प्रतिशत हराउँदा।
के म मेरो SARMS चक्रबाट मेरा लाभहरू राख्छु?
हो! तपाइँको खाना र प्रशिक्षण जाँच मा रहन प्रदान गरीरहेको छ, तपाइँ एक SARMS चक्र समाप्त गरे पछि तपाइँको सबै परिणामहरु कायम गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफेर्मोनहरू र एनाबोलिक स्टेरोइडहरू विपरीत SARMS ले शटडाउनको कारण गर्दैन (शरीरले प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न रोक्दछ) यो प्राय: उनीहरूको चक्रबाट आउने प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको हर्मोनहरूको रूपमा धेरै परिणाम छोड्दछन् जुन चक्रको क्रममा राखिएको मांसपेशीलाई कायम राख्न सक्षम हुँदैन। भाग्यले SARM प्रयोगकर्ताहरूको लागि, यो मामला होईन र हर्मोन सामान्यतया अप्रभावित रहन्छ।